Fomba fitsaboana ny hafanana eo an-tampon'ny induction: inona ny fitsaboana ny hafanana?
Inona no atao hoe hafanana entina mitsabo ny fizotry ny tany?
Fanamorana ny induction dia fizotran'ny fitsaboana hafanana izay mamela ny fanafanana metaly tena lasibatra amin'ny alàlan'ny fampidirana elektromagnetika. Ny fizotrany dia miankina amin'ny onja mandeha amin'ny herin'ny herinaratra ao anaty akora mba hamokarana hafanana ary io no fomba tiana ampiasaina hamatorana, hanamafisana na hanalefaka ny metaly na fitaovana fitondra hafa. Amin'ny fizotry ny famokarana maoderina, ity karazana fitsaboana hafanana ity dia manome fitambarana mahomby amin'ny hafainganam-pandeha, tsy miova ary mifehy. Na dia fantatra tsara aza ireo fotopoto-pitsipika fototra, ny fandrosoana maoderina amin'ny haitao mafy orina dia nanao ny fomba tsotra sy fomba fanafanana lafo vidy ho an'ny fampiharana izay mahatafiditra ny fidirana, ny fitsaboana, ny fanafanana ary ny fizahana fitaovana.
Ny fitsaboana hafanana induction, amin'ny alàlan'ny fampiasana fehy coil be herinaratra azo fehezina, dia hamela anao hisafidy ireo toetra ara-batana tsara indrindra tsy ho an'ny ampahany vy ihany - fa ho an'ny faritra tsirairay amin'ilay faritra vy. Ny fanamafisana induction dia afaka manome faharetana avo lenta amin'ny fizarana diary sy fizarana vatan-kazo nefa tsy sorona ny fikojakojana ilaina hiatrehana ny enta-mavesatra sy ny hovitrovitra. Azonao atao ny manamafy ny fipetrahana anatiny sy ny seza valizy amin'ny faritra be pitsiny nefa tsy miteraka olana amin'ny fanodikodinana. Midika izany fa azonao atao ny manamafy na mametaka faritra voafaritra tsara ho an'ny faharetana sy ny fikojakojana amin'ny fomba mety indrindra hanomezana izay ilainao.
Soa azo avy amin'ny serivisy fitsaboana ny hafanana induction
Fitsaboana hafanana mifantoka Ny fanamafisana ny ety ivelany dia mitazona ny ductility tany am-boalohany ary manamafy ny faritra mitafy ambony amin'ny ampahany. Ny faritra mihamafy dia voafehy araka ny tokony ho izy mikasika ny halalin'ny tranga, ny sakany, ny toerana ary ny hamafiny.
Fihenan-tena mety Esory ny tsy fitoviana sy ny olana amin'ny kalitao mifandraika amin'ny lelafo misokatra, ny fanilo fanilo ary ny fomba hafa. Raha vantany vao arofanina sy apetraka tsara ny rafitra dia tsy misy asa na fiovana tsy ampoizina; ny maodely fanafanana dia azo averina ary tsy miova. Miaraka amin'ny rafitry ny fanjakana maoderina, ny fanaraha-maso ny mari-pana dia manome valiny mitovy.
Famokarana mihamitombo Ny tahan'ny famokarana dia azo hafanaina satria ny hafanana dia mivoatra mivantana sy eo noho eo (> 2000º F. ao amin'ny <1 segondra) ao anatin'ny ampahany. Saika eo no ho eo ny fanombohana; tsy ilaina ny fanafanana na ny fanamoriana.
Natsaraina kalitaon'ny vokatra Ny faritra dia tsy nifandray mivantana tamin'ny lelafo na singa fanamainana hafa; ny hafanana dia ampidirina ao anatin'ny ampahany amin'ny alàlan'ny alàlan'ny herinaratra mifandimby. Vokatr'izany dia mihena ny ady amin'ny vokatra, ny fanodikodinana ary ny tahan'ny fandavana.
Fampiasana angovo mihena Leo ny fampitomboana ny faktiora ilaina? Ity dingana miavaka amin'ny angovo ity dia mamadika hatramin'ny 90% ny angovo lany amin'ny hafanana mahasoa; Ny fatana lafaoro amin'ny ankapobeny dia 45% ihany no mahomby. Tsy ilaina ny kitapo manafana na mangatsiatsiaka ka ahena kely farafahakeliny ny fatiantoka ny hafanana.
Feo tontolo iainana Tsy ilaina ny fandoroana ireo solika fôsily nentim-paharazana, ka miteraka dingana madio sy tsy fandotoana izay hanampy amin'ny fiarovana ny tontolo iainana.
Inona ny fampandroana ny induction?
Induction Heating dia fomba tsy azo iadian-kevitra amin'ny vatana, izay mifoka angovo avy amin'ny sahan'andriamby mifandimby, novokarin'ny Induction Coil (Inductor).
Misy rafitra roa amin'ny fampidirana angovo:
famoronana arus-loop (eddy) ao anaty vatana izay miteraka hafanana noho ny fanoherana herinaratra ny vatan'ny vatana
fanamainana hysteresis (ho an'ny fitaovana andriamby IHANY!) noho ny tsy fitovizan'ny volan'ny micro micro (domains), izay mihodina manaraka ny firosoan'ny sahan'andriamby ivelany
Fitsipika fanamafisana ny induction
Famatsian-kery fanamafisana induction manolotra ankehitriny (I1) mankany amin'ny coil fampidirana
Ny onja coil (fihodinan'ny ampere-turn) dia miteraka sahan'andriamby. Ny tsipika an-tsaha dia mihidy foana (lalàn'ny natiora!) Ary ny tsipika tsirairay dia manodidina ny loharano ankehitriny - ny coil dia mihodina sy ny workpiece
Ny sahan'andriamby mifandimby izay mivezivezy amin'ny faritra ampitana (ampiarahina amin'ilay ampahany) dia mitarika herinaratra ao amin'ilay faritra
Ny herinaratra entina dia mamorona onja eddy (I2) amin'ilay ampahany mikoriana mankany amin'ny lalana mifanohitra amin'ny coil current raha azo atao
Ny onja Eddy dia miteraka hafanana amin'ilay ampahany
Fandehanana herinaratra amin'ny fametrahana indostrialy fanafanana induction
Ny alternating ankehitriny dia manova ny lalana indroa isaky ny tsingerin'ny matetika. Raha 1kHz ny matetika dia miova in-2000 ny torolàlana ankehitriny.
Ny vokatra iray misy ankehitriny sy ny herinaratra dia manome ny lanjan'ilay herinaratra eo noho eo (p = ixu), izay mihodina eo anelanelan'ny herinaratra sy ny coil. Azontsika atao ny milaza fa ny fahefana dia tototry ny ampahany (Hery Matanjaka) ary taratry ny coil (ampahany mihetsika). Capacitor bateria dia ampiasaina mba hamoaka ny generator avy amin'ny hery reactive. Mahazo herinaratra mihetsika avy amin'ny coil ny capacitor ary averiny any amin'ny osilila manohana ny coil.
Ny circuit "coil-transformer-capacitors" dia antsoina hoe Resonant na Tank Circuit.
Sokajy FAQ, Technologies Tags fitsaboana hafanana, fampidirana hafanana, serivisy fitsaboana ny hafanana, fitsaboana amin'ny hafanana, fitsaboana fanafanana, Fitsaboana hafanana HF, fitsaboana hafanana matetika, fitsaboana hafanana matetika, induction heat induction, fizotran'ny fitsaboana hafanana, hafanana eto ambonin'ny tany, fitsaboana fanamafisana ny tany Post Fikarohana